समाचार | समाचार – BSC Nepal
फिदिम टुडे ५ जेठ पाँचथरको तुम्वेवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ लाई वालमैत्री वडा घोषणा गर्न तयारी तिव्र रुपमा अघि वढाइएको छ । जसअनुरुप सरोकारवाला पक्ष सित २ दिन सम्म निरन्तर छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण अभियन्ता सुमन ढकालले गरे । कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष होमनाथ थापाले पौस मसान्तसम्ममा वालमैत्री वडा घोषणा गर्न लागिएको हुँदा […]
फिदिम टुडे ५ जेठ पाँचथरको फिदिममा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । ब्रम्हकुमारी राजयोग पाँचथरको आयोजनामा सुरु भएको प्रशिक्षण कार्यक्रम दुई दिन सम्म चल्नेछ । कार्यक्रममा भगवान भाइले प्रशिक्षण प्रदान गरेका हुन । उद्घाटन कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख बिमल सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएहो हो । कार्यक्रम अन्तरगत बिभिन्न बिद्यालयका बिद्यार्थी र पाँचथर […]
०५ जेठ- धादिङको आदामघाट नजिक बन्छेटारबाट त्रिशूली नदीमा बस खस्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ जना पुगेको छ । काकडभिट्टाबाट काठमाण्डौका लागि छुटेको ना ७ ख ४३ ८७ नम्बरको रात्री बस गजुरी गाउँपालिकाको बन्छेटारमा घुम्तीबाट त्रिशूली नदीमा खस्दा काठमाण्डौको चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी ३५ वर्षकी सीता थपलिया, काठमाण्डौ थानकोटका ५१ वर्षका राजकुमार सुवेदी, कन्याम इलामका २० वर्षका विशाल […]
०५ जेठ,- निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका खनियाँ गत ससदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चितवनबाट सिफारिसको सूचीमा परेका थिए। तर, उनले टिकट पाएनन्। कांग्रेस उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको भन्दै उनीविरुद्ध यसअघि नै उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि खनियाँसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी […]
महिलाहरुको प्रयासमा सहकारी भवन
टुडे संवाददाता /पाँचथर ,०५ जेठ फिदिम–१० याङनाममा खुङखोला महिला कृषि सहकारी संस्थाको भवन उद्घाटन गरीएको छ । महिलाहरुको मेहनतमा ८ लाख रुपैँया खर्चिएर एकतले भवन निर्माण गरीएको हो । विभिन्न क्षेत्रको सहयोग विनानै महिलाहरुले रकम संकलन गरेर उक्त भवन बनाएका हुन । भवनको नेपाल सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व गृहराज्यमन्त्री दिपक प्रकास बाँस्कोटाले एक […]
टुडे संवाददाता/ पाँचथर, ०५ जेठ २५ सय ६३ औ बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत ग्लोबल आईएमई बैंक शाखा फिदिम पाँचथरले फिदिम बजार सरसफाई गरेको छ । ग्लोबल आईएमई शाखा फिदिम पाँचथरको आयोजनमा फिदिम नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ पाँचथर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहआयोजनामा फिदिम बजार सरसफाई गरिएको थियो ।
स्थानीय सरकारले गरेको कामको अनुगमन तथा मुल्याङकन निरन्तर गरिरहेका छौ: विष्णुप्रसाद साप्कोटा
जितेन्द्र भण्डारी जिल्लामा हुने गतिबिधिको समन्वयका लागि तोकिएको निकाय हो जिल्ला समन्वय समिति । पछिल्लो समय बढ्दो समन्वय अभावका कारण झनै यसको आवश्यकता देखिन्छ । सोही समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद साप्कोटासंग पत्रकार जितेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानी आजको टुडे संवादमा । पछिल्लो समय जिल्ला सवन्य समितीले के गरीरहेको छ ? अहिलेको नयाँ संरचनाको सरकार निर्माण भए […]
टुडे संवाददाता/ पाँचथर ,०५ जेठ ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका ९, हाङदेवाका वैकुण्ठ न्यौपानेले झापा चारआलीमा रहेकी छोरीलाई फोनबाट युरिया मल पठाइदिन आग्रह गरे । ‘दाजु बिर्तामोडमा आएको छ, यो पटक तिमीले सधैं पठाएजस्तो आँप, अंगुर पर्दैन, भेट्यौ भने युरिया मलचाहिँ एक बोरा पठाइदेऊ,’ उनले भने । छोरीले पनि कृषि सामग्री संस्थानबाट आफ्नै बालीमा लगाउन निकालेको १ बोरा पठाइदिइन् । […]
एकान्तको बर्मे गाउँ
टुडे संवाददाता/ पाँचथर, ०५ जेठ यतिवेला हरियाली मस्त छ । गर्मीले सताउदै गर्दा लेकमा भने बढो आनन्द हुन्छ । यस्तै आनन्द बोकेको ठाँउ छ बर्मे । बर्मे गाँउको कथा निक्कै रोचक र आर्कषक छ । पाँचथरको उत्तरी याङवकर गाँउपालिका– १ मा बर्मे गाँउ छ । अरुगाँउहरु भन्दा छुट्टै अग्ला पहाड, इवा र बर्मे खेलाले घेरीएर […]
२०७६ जेठ ०५ को राशिफल
मेष– आज तपाइलाइ सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । वृष– आमाको माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ । नसोचेको ठाउबाट धन आर्जन हुने देखिन्छ । मिथुन– लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहनेछ । पेटको खराबीले सताउला । कर्कट– अरूका लागि बुद्धि […]